संक्रमण जितेर खेतीपातीमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
वर्षा सिजन सुरु भएपछि संक्रमित र निको भएर घर फर्किएका सर्वसाधारण खेतीपातीको काममा जुट्न थालेका छन् ।
जेष्ठ २५, २०७८ ठाकुरसिंह थारु, रुपा गहतराज, मनोज पौडेल
काठमाडौँ — बाँझो खनजोत गर्दै थिए, निमोनिया देखियो । बाँकेको राप्तीसोनारी–७ सर्रीका ३२ वर्षीय रामकरन चौधरी ज्वरोले थला परे । चिकित्सकसित परामर्श गरेर कोरोना परीक्षण गराए । वैशाखको दोस्रो साता संक्रमण पुष्टि भयो ।
कपिलवस्तु नगरपालिका–२ रामनगरमा बीउ राख्न खेत हिल्याउँदै कृषक । कोरोनाका बिरामी पनि यतिबेला खेतमा काम गर्दैछन्। तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर
खजुरा–२ की ६५ वर्षीया पार्वती खड्कालाई गत वैशाख २६ मा कोरोना संक्रमण देखियो । खजुरा गाउँपालिकाले बनाएको आइसोलेसन सेन्टरमा १२ दिन बसिन् । त्यतिबेला उनलाई रोगभन्दा खेतबारीको काम सम्झेर चिन्ता लाग्थ्यो । अहिले २ बिघा ४ कट्ठामा रोपाइँ गर्न ब्याड राखिसकेकी छन् । ‘एक हप्ता भयो ब्याड राखेको,’ उनले भनिन्, ‘रोगभन्दा खेतीपातीको चिन्ता छ । वर्षभरिको खाना जोहो यसैबाट हुने हो ।’ कोहलपुर–१४ चित्रानगरकी ५३ वर्षीया अनिता पुन कोरोना संक्रमण भएर निको भएकी छन् । गत वैशाख २१ मा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि खेतीपातीको काममा व्यस्त छिन् । उनलाई खेतीको चिन्ताले सताएको छ । एक बिघा जमिनमा उनले खेती गर्दै आएको वर्षौं भइसक्यो ।
‘हातमुख जोड्न खेती त गर्नै पर्‍यो । रोग त यस्तै हो,’ उनले भनिन्, ‘ब्याड राख्यौं, अब मलको जोहो गर्दै छौं ।’ खजुरामा ७ सय ८० जनामा संक्रमण देखिएकामा ७७ जनाबाहेक सबै निको भएर घर फर्केको खजुरा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सुदीप पौडेलले बताए । ‘धेरै जना निको भएर घर फर्कनुभएको छ । खेती गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘खेतीपातीको समय भएकाले सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य हेरेर काममा लाग्न सुझाएका छौं ।’
कोरोना संक्रमण सुरु हुँदा सर्वसाधारण एकले अर्कोलाई भेट्न डराउँथे । नजिकका आफन्त पनि आउजाउ गर्दैनथे । धेरैबीच भेटघाट नभएको महिनौं भयो । छिमेकी पनि घरमा आउन डराउँछन् । तर, वर्षा सिजन सुरु भएपछि संक्रमित र निको भएर घर फर्किएका सर्वसाधारण खेतीपातीको काममा जुट्न थालेका छन् । उनीहरूलाई रोगभन्दा पनि भोकको चिन्ता छ । समयमै खेती नगरे वर्ष दिन मुख जोड्न समस्या हुन सक्छ । कतिपयले लक्षण देखिएर पनि कोरोना परीक्षण गराउन छाडेका छन् ।
लामो समयसम्म आइसोलेसनमा बस्दा खेतीपातीको समयमा असर पुग्न सक्ने डर किसानलाई छ । राप्तीसोनारी–७ सर्रीका ५३ वर्षीय टीकाराम चौधरीलाई पनि वैशाखको पहिलो साता कोरोना संक्रमण देखियो । सुरुमा सामान्य खोकी लागेकाले उनी डराएनन् । जब खकारमा रगतका छिटा देखा पर्न थाले, उनी डराए । संक्रमणपछि उनी घरकै आइसोलेसनमा दूरी बनाएर बसे । सात जनाको परिवारमा उनलाई बाहेक कसैलाई कोरोना देखिएन । ‘परिवारले मास्क लगाउन कर गर्थे तर, कहिलेकाहीं नलगाएर त्यसै हिँडियो, त्यसैले संक्रमण देखियो,’ उनले भने, ‘सानो लापरबाहीले परिवार नै जोखिममा पारियो ।’ हाल उनी निको भइसकेका छन् ।
बाँकेमा अहिले संक्रमण घट्दै छ । सर्वसाधारण कोरोना संक्रमण भुल्दै खेतीपातीमा जुट्न थालेका छन् । वर्ष दिनको खेतीले छाक टार्दै आएका उनीहरू बीउ र मलको जोहोमा लागेका छन् । लामो समयदेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञापछि कोरोनाको संक्रमण कम भएको भेरी अस्पताल नेपालगन्जका कोरोना स्रोत व्यक्ति डा. संकेत रिसालले बताए । ‘निषेधाज्ञाले भीड हुन दिएन । सामाजिक दूरी बढायो । जसका कारण संक्रमण कम देखिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरो सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै हो ।’
कपिलवस्तुको यशोधरा–८ बाँसखोरका कल्लु यादव पुत्र–शोकमा छन् । भारतको मुम्बईमा कोरोना संक्रमणले १५ वर्षीय जेठा छोराको ज्यान गयो । सँगै रहेका उनी आफू घर फर्किएर संक्रमित भए । संक्रमणमुक्त हुन नपाउँदै खेतीपातीको सिजन सुरु भयो । आफू आइसोलेसनमा बसेका बेला कान्छा छोरालाई बीउ किन्न पठाए । बीउ भिजाए । संक्रमण पुष्टि भएको १० दिनपछि भाइरस हराउँदै जान्छ भन्ने सुनेका उनले १२ औं दिनमा बीउ छरे । ‘कसैलाई बोलाइनँ,’ उनले भने, ‘आफैंले हिल्याएँ ।’ धान नरोपे परिवारका पाँच जनाको मुखमा माड नलाग्ने उनले सुनाए । त्यही भएर बिरामी ज्यान भए पनि खेतीपाती गरिरहेको उनले बताए । सात किलो मोटो धानको बीउ छरेको उनले बताए ।
यशोधरा–४ अम्लोनहाका विश्वनाथ पासीलाई आइसोलेसनमा रहेका बेला खेतीको चिन्ताले झन् गलायो । कोरोना संक्रमणले श्रीमती गुमाएको पीडा छँदै थियो । गाउँका सबैले धानको बीउ राख्न थाले । परिवारका १९ सदस्य नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परे । के गर्ने, कसो गर्ने भनेर छट्पटिए । ‘लक्षण त पूरै थियो तर परीक्षण गराइनँ,’ उनले भने । गाउँघरमा निकै भेदभाव र हेयभावले हेर्ने भएकाले परिवारै आइसोलेसनमा बसेको उनले सुनाए । अहिले सबैको स्वास्थ्य राम्रो हुँदै गएको छ । तर, पूरै दुई साता आइसोलेसनमा बस्न नपाउँदै हतारिएर धानको बीउ किन्न भारत जानु परेको उनले दुःखेसो गरे । सीमाबाट भागेर भारत गए र बीउ लिएर आए, छरे । आराम गर्नुपर्ने बेला वर्ष दिनको गर्जो टार्ने चिन्ताले सताएपछि खेतीपातीमा लागेको उनले बताए ।
अहिले कपिलवस्तु जिल्लामा कोरोना संक्रमित र मुक्त हुने क्रममा रहेकालाई खेतीपातीको चिन्ता छ । रोगभन्दा भोक प्यारो हुँदा उनीहरू पूर्ण रूपमा निको नहुँदै खेतमा ब्याड चहार्न थालेका छन् । सिँचाइका लागि पानीको जोहो गर्नुपरेको छ । शिवराज–१ बनकट्टीका कृषक रामदुलारे थारू संक्रमणले तीन साता थलिए । मुक्त हुन नपाउँदै धानको बीउ नपाउने समस्याले एक साता गाह्रो बनायो । जिल्लामा महिना दिनभन्दा बढी समयदेखि निषेधाज्ञा छ ।
अत्यावश्यकबाहेकका पसल बन्द छन् । बीउबिजनका पसल पनि खुलेका छैनन् । चुलोचौको र वर्ष दिनको घरखर्च चलाउन डरत्रास र जोखिम मोल्दै सीमावर्ती भारतीय बजारबाट बीउ किनेर ल्याउनुपरेको दुखेसो उनले गरे । यस वर्ष स्थानीय तहले बीउबिजन अनुदानमा दिएनन् । ‘नेपाली बजारमा मूल्य मनलाग्दी छ,’ उनले भने, ‘भनेका बेला पाइँदैन । त्यसैले पारि गएर लिएर आएँ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ ०७:१०
नेपालगन्जमा पहिलो चरणको ट्रेसिङ सकियो
संक्रमितले आउजाउ गरेका रानीतलाउ, सब्जीमण्डी, पान पसल, किराना तथा खाद्यान्न पसल र आसपास वडाका ३७२ जनाको ट्रेसिङ र स्वाब संकलन, २३७ को परीक्षण नतिजा आउन बाँकी
वैशाख २९, २०७७ ठाकुरसिंह थारु, रुपा गहतराज, मनोज पौडेल
नेपालगन्ज, कपिलवस्तु — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८, जोलहनपुर्वाका २४ संक्रमितको पहिलो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको ट्रेसिङ सकिएको छ । ट्रेसिङ गरिएकामध्ये अधिकांश एउटै टोलका छन् । संक्रमितले आउजाउ गरेका रानीतलाउ, सब्जीमण्डी, पान पसल, किराना तथा खाद्यान्न पसल र आसपासका वडाका व्यक्तिको ट्रेसिङ पूरा गरेर स्वाब संकलन गरिएको हो ।
नेपालगन्ज–८ र ११ वडाका १ सय ६२ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । ट्रेसिङ गरिएका जामा मस्जिद क्षेत्रका ७५ जनाको स्वाब भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा जॉच भइरहेको छ । नेपालगन्ज र काठमाडौं पठाइएको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आइतबार साँझसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘पहिलो संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति र त्यसपछि संक्रमित भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरूको ट्रेसिङ गरी स्वाब संकलनको काम सकिएको छ,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले भने, ‘शनिबार संकलन गरिएको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।’ अहिलेसम्म संक्रमित र उनीहरूको सम्पर्कमा आएका ३ सय ७२ जनाको ट्रेसिङ गरी स्वाब संकलन गरिसकिएको छ ।
संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ सकिएपछि आइतबारदेखि सीमासँग जोडिएको नेपालगन्ज–१६, जयसपुर र कोहलपुर नगरपालिका–४, ८ र ९ वडाका ३० जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ । कोहलपुरबाट ३० जनाको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि भेरी अस्पतालको ल्याबमा पठाइएको छ । जयसपुरमा ९८ जनाले स्वाब जाँचका लागि नाम लेखाएका छन् । हावाहुरीका कारण स्वाब संकलन अवरुद्ध भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामबहादुर चन्दले बताए । यहाँ ट्रेसिङको दायरा बढाएको उनले जनाए ।
‘प्रभावित क्षेत्रमा ट्रेसिङ सकिएपछि अन्य वडामा पनि जाँच बढाएका छौं । अन्य स्थानमा पनि ट्रेसिङ गरेर जाँच गर्छौं,’ उनले भने । सरकारले नेपालगन्जका लागि एक हजार भीटीआर र दुई हजार पीसीआर पठाएपछि ट्रेसिङ र टेस्टिङको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । कोरोनाको परीक्षण तीव्र हुन थालेपछि नियन्त्रण सहज हुने विश्वास गरिएको छ । कोरोना संक्रमण देखिएको जोलहनपुर्वालाई पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ ।
भारतबाट आउनेका कारण जोखिम
कोभिड–१९ को संक्रमण समुदायमा सरेपछि नियन्त्रणमा चुनौती थपिएका बेला भारतबाट लुकीछिपी आउने क्रम नरोकिँदा अन्य पालिकामा पनि जोखिम बढेको छ । नेपालगन्जमा कोभिड–१९ को संक्रमण समुदायमा सरेपछि नियन्त्रणमा चुनौती थपिएका बेला भारतबाट लुकीछिपी आउने क्रम नरोकिँदा अन्य पालिकामा पनि जोखिम बढेको हो । नेपालगन्जमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति भारतको नानपाराबाट आएका थिए । त्यसलगत्तै उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको स्वाब जाँच गर्दा एउटै टोलका २३ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा महामारीका रूपमा कोरोना फैलिएका कारण त्यहाँबाट भागेर आउनेहरू बढेका हुन् । रातिको समयमा सुरक्षाकर्मीलाई झुक्याएर सीमावर्ती गाउँमा घुलमिल हुँदा जोखिम बढेको हो । लुकेर आउने व्यक्तिको खोजी गर्न समस्या हुँदा कोरोना जाँच गर्न मुस्किल हुने गरेको छ ।
भारतसँगै जोडिएको बाँकेको पूर्वीदक्षिण गाउँपालिका नरैनापुर नाकाबाट दैनिक दर्जनौं व्यक्ति नेपाल पसिरहेको बताइन्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले पारि लखेट्छन् । वारि आउन नेपालका सुरक्षाकर्मीले रोक्ने गरेका छन् । नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहम्मद इस्तियाक साहले भारतबाट आउन खोज्नेलाई रोक्न समस्या भइरहेको बताए । ‘अझै पनि १५/२० जना सीमाको जंगलमा बसेका छन् । उनका परिवारले ल्याई दिन दबाब दिन्छन् । तर उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने भएकाले ल्याउन समस्या छ,’ उनले भने, ‘सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नसक्ने हो भने कोरोना फैलिन्छ, फैलिन्छ ।’
सीमामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी तैनाथ गरिएका छन् । तर, जनशक्ति अभावका कारण ग्रामीण नाकामा बाक्लो गरी सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति छैन । ‘सीमा पूरै खुला छ । रातिको समयमा सुरक्षाकर्मीलाई झुक्याएर नेपाल छिर्छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष साहले भने, ‘कोरोना भित्रिन नदिने हो भने सीमामा थप जनशक्ति परिचालन गर्न आवश्यक छ ।’
खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले दुई/तीन दिनअघि भारतको दिल्लीबाट आएका दुई व्यक्ति सीमाका सुरक्षाकर्मीलाई झुक्याएर घर आएको जानकारी आएको बताए । हाल दिल्लीमा कोरोनाको महामारी फैलिएको छ । उक्त पालिका भारतको सीमासँगै जोडिएको छ । ‘दिल्लीबाट आएका दुई व्यक्ति सीमा पार गरेर आएको खबर आएपछि खोजी गर्‍यौं । उनीहरूलाई घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूको कोरोना जाँच गराउन पहल भइरहेको छ ।’ बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले लकडाउनका बेला १६ जना तेस्रो मुलुक र २ सय ४६ जना भारतबाट घर फर्किएकाहरूको परीक्षण हुन नसकेको जनाए ।
भारतका विभिन्न राज्यमा फैलिएको कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गरी सरकारले कुनै पनि व्यक्ति प्रवेश गर्न नपाउने निर्देशन दिए पनि गत साता भारत महाराष्ट्र, झाँसी, कानपुर, दिल्ली र पन्जाबबाट लुकीछिपी २१ जना कामदार नरैनापुर फर्किएका छन् । भारत श्रावस्ती जिल्ला भिन्गास्थित क्वारेन्टाइनले उनीहरूलाई राख्न नमानेपछि भारतीय प्रहरीले नरैनापुर गाउँपालिका–१, सुइया नाकाबाट उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गराएको थियो । मजदुर फर्किएको सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै उनीहरूलाई आदर्श मावि लक्ष्मणपुरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । २१ जनालाई लगेर दशगजामा राखेको छ । सीमा क्षेत्रमा अहिले पनि एक सयभन्दा बढी कामदार अलपत्र छन् ।
एक दर्जनसित घुलमिल
कपिलवस्तुमा एक साताअघि सीमाबाट लुकेर आएका पाँच जनामा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएको छ । आइतबार पनि उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । तीन जना संक्रमित पाइएको मायादेवी गाउँपालिका–२, अभिरावलाई सिल गरिएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट डा. यदुचन्द्र घिमिरे नेतृत्वको टोलीले अभिरावमा पुगेर उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ संकलन गरेको थियो । उनीहरूको पहिलो सम्पर्कमा आएका केही व्यक्तिलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको उनले बताए । ‘मायादेवी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्दा संक्रमितले १० जनाभन्दा बढीसित घुलमिल गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘संक्रमितको सम्पर्कमा आएका उनीहरूलाई छुट्टै बस्न भनेका छौं ।’ अहिले ती व्यक्तिलाई ट्रेसिङ फर्म भर्न लगाइएको र त्यो पूरा भएपछि थप विश्लेषण गरेर सतर्कता अपनाइने घिमिरेले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ ०९:११